Firefox 66 ichave nekubatana zvirinani neGNOME, beta yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 66 ichave nekubatana zvirinani neGNOME, beta yave kuwanikwa
Nesvitsuro iri kuuya yeFirefox 55, Mozilla ikozvino inogona kutarisa mukuvandudza nekuvandudza iyo inotevera vhezheni yayo yepamuchinjika-chikuva webhu browser. Firefox 66, inotarisirwa kusvika pakati paKurume.
Sezvakangoita pakuburitswa kwese kweFirefox, Mozilla ichaedza kugadzirisa kugadzikana uye kuita kwayo inozivikanwa browser, kuita zvinhu zvitsva uye sarudzo. Izvi ndozvazvakaita neFirefox 66, iyo yave kusimukira nekuchinja kukuru munzira.
Kune vashandisi veLinux, nhau dzakanaka ndedzekuti Firefox 66 ichasvika ine yakavharika zita rebha, izvi kuitira kuti ubatanidzwe zvirinani nemirau yeGNOME desktop nharaunda, iyo inoshandiswa mukuparadzira kwakakurumbira kwakawanda, kusanganisira Ubuntu.
Kufambisa uye kugadzirisa mashandiro
Firefox 66 ichavandudza maitiro ekutsikisa nekuwedzera anchor, iyo inodzivirira zvemukati zvewebhu kusvetuka kutenderera nguva irimo peji kurodha pasi, ichiwedzera kugona kwekutsvaga pakati pekuvhura tabo kubva kune iyo menyu menyu, vharidzira kutamba kwemultimedia zvemukati zvine default odhiyo, uye nekuvandudza kwakawanda mukati browser mashandiro.
Dzimwe shanduko dzinozivikanwa dzinosanganisira iyo kunatsiridza kuita kweI / O, kugona kunyora kana kubata ekuwedzera ekuwedzera keyboard mirairo kubva pane iyo: addons peji, nyowani nezve: yakavanzika peji rekutsvagisa nekutsvaga, uye notices nyowani kuzivisa vashandisi ve peji rekutadza chikanganiso, kutyora iyo HTTPS kubatana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 66 ichave nekubatana zvirinani neGNOME, beta yave kuwanikwa
Chero kuvandudzwa kwatiri kunokosheswa, ndezvekurangarira kuti mushure memakore gumi nemana ekuvapo uye uri bhurawuza rinonyanya kushandiswa nevashandisi veGNU / Linux vane inopfuura 14% yequota, IZVO ZVOKUPEDZISIRA izvo chete kusvika kunguva 60 yeiyi browser, ndiko kuti, kudzamara ingori pasi pemwedzi mipfumbamwe yapfuura isu tanga tine vhezheni yekutanga neyekuzvarwa CSD kana zvirinani neiyo inoshungurudza uye inonetsa yakavanzwa zita bha, kana kune mamwe masisitimu anoshanda yagara iri default.
Kuregererwa kwekushandurwa kweiyi browser kunonyadzisa isu vashandisi veGNU / Linux, zvinosuwisa zvikuru apo Chromium / Chorme vagara vachizvipa, uye vasiri mumhuri.
Mushure memakore maviri ebudiriro kunouya Kodi 18 Leia